Kooxda Napoli oo weyn karta Lorenzo Insigne kulanka Champions League ee ay wajahayaan Barcelona – Gool FM
(Naples) 04 Agoosto 2020. Kooxda kubadda cagta Napoli ayaa weyn karta adeegga xiddigeeda weerarka uga ciyaara ee Lorenzo Insigne marka ay Jimcaha u safrayaan Barcelona, halkaasoo ay kula soo ciyaarayaan lugta labaad ee wareegga 16-ka Champions League.
Kooxda ayaa xaqiijisay in Kabtankeeda uu la dhibtoonayo dhaawac seedka lugta ah oo soo gaaray kulankii ay 3-1 uga adkaadeen Lazio Axaddii.
Lorenzo Insigne ayaa rigoore goor hore u dhaliyey kooxdiisa kulankaas, laakiin xanuun ayaa looga saaray ciyaarta daqiiqadihii ugu dambeeyey.
Kooxda ka dheesha horyaalka Serie A ayaa sheegtay in 29-sano jirkaan si dhow loola socon doono xaaladdiisa ka hor kulanka ka dhacaya garoonka Nou Camp.
Bayaan ka soo baxay kooxda oo lagu faafiyey Website-ka rasmiga ah ee kooxda ayaa lagu sheegay in tijaabooyinkii la mariyey Lorenzo Insigne ay xaqiijinayaan inuu la dhibtoonayo dhaawac seedda lugta ah iyo dhaawac muruqa boqdada bidix ah.
Waxa ay qormadeeda kooxda Napoli raacisay inuu ku dhaawacmay kulankii ay la ciyaareen Lazio, isla markaana xaaladda laacibkan si dhow loola socon doono maalmaha soo socda.
Xiddigan reer Talyaani ayaa loo diiwaan inuu dhaliyey 12 gool isla markaana caawiyey 8 gool oo kale tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan, waana ciyaaryahan fure ah kooxda uu hoggaamiyo Tababare Gennaro Gattuso.
Napoli ayaa barbaro 1-1 kula gashay Barcelona magaalada Naples, Dries Mertens ayaana hoggaanka u dhiibay kooxdiisa qeybtii hore ee ciyaarta, laakiin Antoine Griezmann ayaa goolka barbaraha u dhaliyey kooxda ka dheesha horyaalka La Liga.
Arturo Vidal oo ka tirsan Barcelona ayaa la siiyay casaan xilli dambe kulankaas, taasoo la micno ah inuu ganaax ku seegi doono kulanka lugta labaad ee ka dhacaya Magaalada Barcelona.
Napoli ayaa ku dhammaysatay kaalinta 7-aad ee kala sarreynta horyaalka Serie A, laakiin waxa ay u soo baxeen Europa League kaddib markii ay ku guuleysteen Coppa Italia.